गुमाउनु पर्ने केहि छैन , मौका दिने कि ! – onlinekhelkhabar.com
गुमाउनु पर्ने केहि छैन , मौका दिने कि !
सलमान शाह	Posted on २९ भाद्र,२०७६
शलमान शाह , अनलाइन खेलखबर || नेपाली क्रिकेट टिमको अबको तालिका के रहेको छ ? त्यसबारेमा हामि धेरै अवगत भएकै कुरा हो जसअन्तर्गत अब नेपालले दुई राष्ट्रको भ्रमण गर्दैछ ।
पहिलो सिगांपुर र दोस्रोमा ओमान भ्रमणमा नेपाली टोलीले अब खेल्ने खेलको तालिका हो ।
आउँदो मसिर महिनामा नेपालमै हुन गईरहेको दक्षिण एसियाली खेलकुद ( साग ) को मुख्यतया टिम तयारीका क्रममा बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ । त्यसैबीचमा नेपाललाई दुई ठाउँबाट खेल्नका लागि प्रस्ताब आएको छ ।
र नेपालले पनि त्यो प्रस्ताबलाई स्वकार्दै सहभागी जनाउने भएको छ यसलाई नेपालले सागको तयारीमा थप टेवा पुर्याउने बिश्वास समेत लिएको छ ।
साग आउँन अझै केहि महिना बाकि रहेको अवस्थामा असोज बिशेषगरि नेपालीहरुको महान पर्व दशै माहोलमा लगातार दुई श्रीङखलामा नेपालले सहभागिता जनाउँदै छ ।
असोज १० देखि १६ मा सिगांपुरमा नेपाल खेल्नेछ । जहाँ ३ टिम जिम्बाबे , स्वयम् सिगांपुर र नेपालबीच त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ । यो सिरिज खेलेपछि नेपाल फेरी अर्को सिरिज खेल्न ओमान प्रस्थान गर्नेछ ।
ओमानमा असोज १८ देखि २३ सम्म अर्को सिरिज सुरु हुनेछ । यहाँ भने ३ होईन की ५ टिमले सहभागिता जनाउदै छन । जसमा सिगांपुर र नेपाल सहित आयोजक ओमान , नेदरल्याण्ड र टेस्ट राष्ट्र आयरल्याण्डको सहभागिता रहने छ ।
नेपाल बाहेक अन्य टिमहरु मिसन विश्वकपका लागि र नेपाल भने मिसन सागको तयारीमाको रुपमा यो सिरिजलाई लिएको छ ।
सन् २०२० मा अष्टेलियामा हुने आईसीसी टि- ट्वान्टी विश्वकपका लागि छनोटको अन्तिम चरणमा ग्लोबल क्वालिफायर जो आउदो कार्तिक १ देखि १६ गतेसम्म युएईमा हुदैछ । जसमा यी माथिका टिमसहित कुल १६ टिमले सहभागिता जनाउदै छन तर यसमा हाल अन्तराष्टिय क्रिकेट परिषद ( आईसीसी ) को निलम्बनमा रहेको टेस्ट मान्यता प्राप्त जिम्बाबे भने यो छनोट खेल्न नपाउने घोषणा आईसीसीले गरिसकेको छ ।
जिम्बाबेको ठाउमा नाईजेरियाले यो छनोट खेल्नेछ । यसको अर्थ आगामी विश्वकपमा हामि सिदै जिम्बाबेलाई देख्न सक्ने छनौ ।
यता एकदिवसिय मान्यता प्राप्त हामि नेपाल भने विश्वकपको दोस्रो छनोट पार गर्न हामी सकेनौ । अघिल्लो साउन महिनामा सिगांपुरमा भएको छनोट प्रतियोगितामा नेपालले निकै खराब प्रदर्शन र सोच भन्दा धेरै बिपरित खेल्दा नेपाल छनोट हुन सकेन ।
विश्वकपको दोस्रो छनोट अर्थात एसिया फाइनल छनोट जसमा नेपाललाई प्रतियोगिता अघि छनोटको दाबेदार मध्यको एक टोलीको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । नेपाल पनि उच्च मनोबलका साथ् छनोट प्रतियोगिता खेल्न सिगांपुर पनि पुगेको हो र खेलेको पनि हो तर … नेपाल कुल ५ टिम सहभागी रहेको प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो ।
प्रतियोगिताको प्राबधान अनुसार लिगको शिर्षस्थानमा रहने एक मात्र टिमले विश्वकपको आगामी यात्रा तय गर्ने थियो । जसमा सिगांपुरले बाजी मार्यो ।
यस्तो अबस्था थियो की अन्तिम खेलले छनोटको भाग्य रेखा तय गरेको थियो । प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा सिगांपुर र नेपाल भिडेका थिए । यो खेल जस्ले जित्यो त्यो टोली ग्लोबल छनोटमा छानिने थिए ।
भन्ने हो भने माहोल कुनै प्रतियोगिताको फाइनल अनुभूति गराउने थियो । एक किसिमको अघोषित फाइनल नै रहेको थियो त्यसमा नेपाल निकै ८२ रनले पराजित हुन पुग्यो |
नसोचेको प्रदर्शन र लज्जास्पद हारका बाबुजुत नेपाल पुन विश्वकप खेल्ने आफ्नो सपना पूरा गर्न सकेन नेपाललाई कतारले समेत उछिन्यो समान अंकभएपनि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहयो । प्रतियोगिता भर नेपाली आलोचित समेत बन्यो समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई यो छनोट सुखद कुनै अर्थमा हुन सकेन ।
पहिलो खेलमा कतारसँग अपत्यारिदोहार संगै सुरुवात गरेको नेपालको अन्त्यपनि दुखद तरिकाले हुन पुगेको थियो ।
जसको परिणाम नेपाल सरहका टोली अहिले विश्वकप खेल्ने सपना सहित अभ्यास गरिरहेका छन । र नेपालले पनि अभ्यास गरिरहेको छ ।
फरक त्यति हो त्यो हामीसबैलाई जानकारी नै छ । तर यहां आउछ नेपालले भने अबका सिरिज आफ्नो प्रतिष्ठालाई जीवित राख्नका लागि पनि राम्रो खेल्नु पर्ने बाध्यता छ । यहां कुनै टिमलाई गुमाउनु केहि छैन । अनुभव र प्रयोगका लागि यस्ता प्रतियोगिताले कोशेढुंगाको माध्यम बन्न सक्छ ।
अब नेपालले के गर्छ , पक्कै नेपालले आफ्नो गुमेको शाखलाई जीवित राख्न यसलाई महत्वपूर्ण तरिकाले ग्रहण गर्नेछ ।
एसिया फाइनलले दिएको पिडालाई केहि हदसम्म भुल्याउन र आफ्नो पुरानो शाख फिर्ता लिदै नेपाल कमजोर भईहालेको छैन भन्ने संदेश दिन पनि नेपाललाई सिगांपुर र ओमान भ्रमण जरुरी रहेको छ ।
यस प्रतियोगीताले अबस्थालाई अझ नजिकबाट निल्याने माहोल मिल्नेछ । वस ! एसिया फाइनल छनोटमा मात्र कमजोर देखिएको हो कि साचिक्कै कमजोर बनिसकेको छ त्यसको असली परिक्षा यस प्रतियोगिताबाट पक्कै मिल्नेछ ।
तर अर्को पाटो नेपाललाई गुमाउनु केहि छैन अरुले पनि अभ्यासका लागि यी सिरिजलाई उपयोग गर्दा नेपालले पनि सोहि बाटोमा जाहोस भन्ने केहि क्रिकेट नजिकका जानकार पनि बताउछन |
यसलाई नेपालले केहि अनुभव र प्रयोगका रुपमा लिन सक्ने जसले टिमको सन्तुलन मापन पनि हुने , टिमको स्थिति पनि थाहा पाईने र समग्रमा टिमको अबस्था बारे जानकार भईने भनेर सल्लाह पनि अहिले सुन्न पाइन्छ ।
खेल्न गएपछी जित्नैका लागि खेलिन्छ , यो होईन की गुमाउनु केहि छैन भन्दैमा प्रयोगलाई हाबी गर्न दिनु पनि हुदैन र त्यसमा हामि केहि प्रयोग गर्न सक्छौ त्यसका लागि यस्ता प्रतियोगिता उत्कृष्ट माध्यम मानिन्छ । जो विश्व क्रिकेटमा सबै टिमले अपनाउदै आएका छन ।
त्यसको गतिलो उदारण हाम्रै छिमेकी जो क्रिकेटको आफूलाई महा सक्तिशाली पनि ठान्छ , एक किसिमले हो पनि , भारत् ले टिम , अबस्था हेरेर टिम पठाउछ , जस्तो टिम आफ्नो पनि उस्तै टिम यहां यो उदारण दिने प्रयास गरिएको छ की एउटा राम्रो शैलीलाई हामिले कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
यो विश्व क्रिकेटमा जुनसुकै अबस्था र लेभलमा पनि गर्न सकिने हुन्छ । यसले के गर्छ के फाईदा गर्छ , हो यो कुरा मुख्य हुँन आउछ । पहिलो त टिम सन्तुलन कसरी गर्न सकिन्छ अर्को भनेको समान अवसर प्रदान हुन्छ , प्रतिभा देखाउन र ओझेलमा परेकालाई राम्रो अवसर बन्छ र टिमको क्षमता भबिस्यको मार्गदर्शनमा यो माहोलले अबसर बनि दिन्छ ।
त्यसैले आसन्न सिगांपुर र ओमान भ्रमणमा केहि यस्ता प्रतिभा छन जसलाई मौका दिन सकिन्छ , गुमाउनु केहि छैन मौका दिने कि ! पक्कै दिनु पर्छ । बिश्वास गरिनु पर्छ । अब यो होईन टिम पनि सन्तुलनमा बनोस लक्ष्य बनेको जित्ने नै हो त्यसका लागि अनुभवीका साथ अनुभव प्राप्त गर्न प्रयासरत रहेका लाई मौका दिनु पर्छ ।
जो अहिले बन्द प्रशिक्षणमा समेत बाक्लो सङख्यामा रहेका छन । जसले आफुलाई प्रमाणित गर्न लालाहित पनि देखिएका छन । नेपालीमा एउटा उखान नि रहेको छ नि “ सर्प पनि मरोस लाठी पनि नभाचिओस् ” हो यही सिद्दान्तमा टिमले यो अवसरलाई परिणत गर्नुपर्ने देखिन्छ । ……
Previous Postआज सिपिएलमा सन्दिपको टिमको तेस्रो खेल हुँदै
Next Postकलेज क्रीकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि ब्लुवर्डलाई
विवाह बन्धनमा बाँधिए क्रिकेटर विनोद भण्डारी
सुनिल चम्किँदा भारत फाइनलमा
दिल्लीमाथि रोमान्चक जित निकाल्दै कोलकता आईपीएलको फाइनलमा
प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले नेपाली टोली छोड्ने घोषणा
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता : नेपाल पहिलो पटक साफको फाइनलमा
नेपाल भारतसँग पराजित : यस्तो छ नेपाल फाइनल पुग्ने समीकरण
दिल्लीमाथि रोमान्चक जित निकाल्दै चेन्नई फाइनलमा
आईपीएलको फाइनल पुग्न चेन्नईलाई दिल्लीको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य